Walaayitaa Sooddootti namoonni to'atamanii turan gadhiifaman - BBC News Afaan Oromoo
Walaayitaa Sooddootti namoonni to'atamanii turan gadhiifaman
Madda suuraa, Wolaita Zone City administration Facebook page
Walaayitaa Sooddootti namoonni gaaffii godinichi naannoo ta'uuf dhiyeessaa jiruun walqabatee kaleessa komaandi postiin to'annaa jala oolfaman gadhiifaman.
Haata'u malee, itti-gaafatamaan Waajira Sosochii Biyyaalessaa Walaayitaa Obbo Andu'aalem Taaddesaa ammayyu to'annaa jala jira.
Adda Dimokiraatawaa Ummattoota Wolaayitaatti gaggeessaan Damee Dargaggootaa Obbo Ashannaafii Kabbadaa BBC'tti akka himanitti gaaffiin Walaayitaa naannoo ta'uu gaafachaa ture har'a waggaa tokko guutuura.
Kanaan walqabatee hiriira gaggeessuuf dargaggoota waliin walitti qabamanii wayita jiranitti ture kan to'annoo jala oolfaman.
Inniifi namni biraan miseensa paartii isaa ta'e Obbo Warqinaa Gabayyoo hiriira hin hayyamamiin gaggeessaa jirtu jechuun akka qabaman himuun, gara buufata poolisiittillee akka hin geeffamiin ibseera.
Bakka buutonni Walaayittaa MM Abiy waliin mari'atan
Yeroo to'atamnee turretti komunikeeshinii karaa elektirooniksii kamiyyu akka hin taasine dhorkamanii akka turan himuun boodarra waliin dubbachuun gadhiifamneerra jedhe.
Maanguddoo magaalaa Sooddaa kan ta'an Obbo Naggaa Angooree gaaffiin naannoo ta'uu Walaayitaa A L I ar'a Sadaasa 10/04/2012 waggaa tokko guutuu ilaalchisee hiriira gaggeessuu isaanii BBC'tti himaniiru.
Bulchiinsa magaalaa Walaayitaa Sooddoos maanguddoota, dargaggootaa, dubartootaa, daldaltootaafi hojjetoota mootummaa waliin galma magaalattii Guteeraa jedhamu keessatti marii gaggeessuu isaa fuula Feesbuukii isaarratti barreesseera.
Obbo Ashannaafiin erga gaaffii isaanii dhiyeessanii waggaa akka guuteeru yaadachuun bu'uura seeraatiin har'a irraa eegalee naannoo Kibbaa jalatti akka hin bulle BBC'tti himaniiru.
Jiraattonni magaalaa Walaayitaa Sooddoo BBC'n dubbise akka jedhanitti magaalattii keessa guyyaa ar'aa sochiin tokkollee hin jiru. Manneen daldalaafi tajaajila dhiyeessan cufaa akka oolan dubbatu.
Magaalaa Walaayitaa Sooddoo keessa tajaajilli geejjibaas akka hin jirre himuun humni raayyaa ittisaa garuu daandiirratti hedduminaan akka mul'atan dubbatu jiraattonni kunneen.
Kun osoo kanaan jiruu gaaffii godinichi akka naannootti of ijaaru qaba jedhu deggeruun magaalawwan godinicha keessa jiran hedduun hiriira gaggeessuu isaanii Obbo Ashannaafiin BBC'tti himaniiru.
Magaalaawwan akka Kindoo Didaayyee, Booddittii, Bolosee Boombee, Hobichaanaafi Abellaa Abbayaa hiriirri kan keessatti gaggeefaman keessaa muraasa.
Aanga'oota godinichaa yaada isaan qaban gaafachuuf yaaliin bilbilaan taasifne hin milkoofne.
Bakka buutonni uummata Walaayittaa MM Abiy Ahimad waliin mari'atan
Itoophiyaa: Gaaffiin naannoo ta'uu Gedewoo maal irratti argama?
Gaaffiin ummata Waalaayittaafi deebiin Ministira Muummee maal ture?